Ama-pancake alula, iresiphi ngesithombe. Izindlela zokupheka ezikhethiwe zokulungiselela ama-pancake amancane ngemigodi, ebisi nasegurt
Ama-pancakes amancane afana nabantu bonke ngaphandle kokuhlukile. Zikulungele futhi zigcwaliswe ngokuhlukile, futhi zivele zikhonza etafuleni nge ukhilimu omuncu noma i-cottage shizi. Ngokuvamile ama-pancake anjeziwe ngenyama noma ushizi, i-caviar noma isibindi, kanye nazo zonke izinhlobo zokugcwalisa okumnandi. Ukuze ube nesidlo ozithandayo sibe nokubonakala okucashile, kungcono ukupheka ubisi noma i-kefir. Inhlama yama-pancake anjalo ngokuvamile afana ne-ukhilimu omuncu omuncu, kodwa akufanele uvumele ukufana okunamandla kwamanzi. Ngezansi sikunikeza izindlela zokupheka eziningana, ukupheka ama-pancake okumnandi, kufaka phakathi ukwengezwa ubisi kanye ne-kefir.
Iresiphi yama-pancake amancane anezimbobo
Le dish ingahlanganiswa nezinhlobonhlobo zokugcwalisa: kokubili okumnandi, nenyama noma amakhowe. Ama-pancake othosile angcono kakhulu epanini yensimbi yensimbi yocingo - ngakho-ke azosebenza kahle nemigodla, kodwa i-pan yokuthosa i-iron ibuye ifanele ukufisa. Ukupheka up pancakes omncane ngemigodi akuyona neze nzima!
Ubisi - 250 ml
Izipuni ze-Sugar - 2.
Kefir - 1-2 wezipuni.
Amafutha e-sunflower - 2 tbsp.
Ihlumela - kancane kancane kuneglasi
Qala ukushaya amaqanda ngokucophelela, wanezela usawoti noshukela kubo. Thela uhhafu ingilazi yobisi kanye ne-kefir, engeza ufulawa nge-soda.
Hlanganisa ingxube ngokuxuba bese uthola inhlama, bese ufaka amafutha ahlanziwe futhi uphinde uqhube inhlama kuze kube yilapho ihlangana. Khumbula ukuthi ama-pancake amancane atholakala lapho inhlama isetshenzisiwe. Siqala ukudlala ama-pancake.
Ngokushesha nje lapho uhlangothi lokuqala lokuhlolwa lusiwe, yibuyisele kwesibini. Siphendulela isidlo esilungisiwe sibe unxantathu noma siyifake ngokugcwalisa okulungiselelwe.
Ama-pancake omnandi amnandi ebisi, iresiphi ngesithombe
Le recipe idinga ubisi obuningi izikhathi ezingu-2 kunangaphambili. Ngakho-ke, inhlama ingaphezulu ketshezi, futhi ama-pancake - amancane. Zama ukupheka lezi pancake ezincane ngobisi.
Amaqanda - izingcezu ezingu-1-2.
Umfula - 1 ingilazi
Amafutha e-sunflower - 1 tbsp.
I-Sugar - 1 tbsp.
Usawoti - isigamu sezipuni
Hlanganisa amaqanda ambalwa nge-whisk bese uhlanganisa no 200 ml ubisi, engeza usawoti noshukela.
Phakamisa ufulawa bese ufaka kancane kancane inhlanganisela yamaqanda ubisi. Hlanganisa nomxube.
Engeza konke ubisi uphinde uhlanganise. Inhlama iyoba njengokhilimu omuncu omuncu.
Manje engeza ufulawa oluhlanjululwe kulo hlama bese uxuba kahle uze ubushelelezi. Thela emafutheni amancane yemifino (noma ocolile ocolile).
Fry inhlama epanini elitshisayo elitshisayo ezinhlangothini zombili kuze kube nsundu yegolide. I-pan yokudoba ingagcozwa ngendwangu yamafutha noma inani elincane lamafutha yemifino.
Ukupheka ama-pancake amancane, usonge ama-gramu angu-100 we shizi osikiweyo enhlama-ukunambitheka okungavamile kwesidlo oyithandayo kakhulu!
Ama-pancake amancane amancane ngobisi: iresiphi yama-classic
Amapancake ale recipe ayilungiswa kakhulu futhi athola ukunambitheka okuhle kakhulu. Uma ufisa, ungangezela ushukela kancane, uma uthanda amnandi. Zama ukungabeki amaqanda amaningi, uma ukwandisa inani lezimboni zezinsiza eziningi: ilitha elilodwa lebisi lanele amaqanda amane.
Ubisi - isigamu ilitha
I-flour ihlungiwe - 200 g
Amafutha omifino - 2 tbsp.
Usawoti - 1 tsp.
I-soda encane kanye noviniga
Sihlanganisa ufulawa, ushukela nosawoti. I-Gasim soda bese ufaka engxenyeni.
Hlanganisa namaqanda bese uxubanise kahle nomxube noma i-whisk.
Khulisa kancane ubisi uphinde uhlanganise kahle ubukhulu obumphumela.
Ekugcineni, sinezela amafutha omquba enhlama, sihlanganise bese uqala ukuthosa.
Iresiphi yama-pancake amancane ku-yogurt
Uma ungakaze upheke ama-pancake, bese uqala nale recipe! Ama-pancake ayenziwe nge-yogurt, azoba mncane kakhulu emaphethelweni aphuza umlomo.
I-Kefir - 120-150 ml.
Umfula 150 g
Ibhotela - 40-50 g
Ushukela - 80 g
A little usawoti
Hlanganisa indebe enkulu ejulile kasawoti, ushukela kanye nofulawa osikiwe.
E-kefir, engeza amanzi amancane (70-75 ml) bese uthele indebe ngezithako ezomile.
Smash amaqanda ambalwa enhlama uhlanganise kahle.
Hlanganisa ibhotela emlilweni bese uthele inhlama. Faka kuze kube bushelelezi.
Thela inhlama ibe epanini elitshisayo futhi upheke kuze kube nsundu yegolide.
Ama-pancake amancane ekhaya, iresiphi ngesithombe
Iresiphi elula yama-classic, ukupheka ukwelashwa okuthandayo ngobisi. Ama-pancakes akhiphekayo angakhonzwa agcwele izinto nganoma yikuphi ukugxila: i-jam, i-cottage shizi noma ngisho nezincezu zezinhlanzi.
250 g kafulawa
1 tbsp. ushukela
1 tsp usawoti
2-3 wezipuni amafutha (i-sunflower)
Sishaya amaqanda, usawoti kanye noshukela ndawonye.
Thela u-250 ml ubisi, bese ufaka ufulawa. Hlanganisa kahle usebenzisa i-mixer.
Engeza enye i-250ml yobisi bese uvuselela futhi, ungavumeli ukwakheka kwezibani.
Inhlama uthele emafutheni, gubungula bese ulinda imizuzu engu-15-20, emva kwalokho sifuna epanini elishisayo lokuthosa epanini.
Fry ama-pancakes amaminithi ambalwa aze aphenduke kusukela ngezansi, bese aphendukela kolunye uhlangothi. Kodwa-ke, uma ufuna ukuzifaka, ungafisa kuphela ohlangothini olulodwa.
Amapancake amancane: iresiphi yevidiyo
Kulesi siqeshana inqubo yokulungiselela amathekheni wethenda ne-air ichazwe ngokuningiliziwe. Zonke izenzo kuvidiyo zichazwe ngesinyathelo ngesinyathelo futhi ngeke kube nzima ukwenza inhlama yamaphakheki kanye nalesi sidlo. Ama-pancake amancane anambitha kakhulu futhi azokwenzela wonke umuntu ngaphandle kokungafani! Ama-pancake amancane ngobisi: iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo. Futhi uzoba nesithakazelo ezihlokweni: Ama- pancake amnandi kwi-yogurt: izindlela zokupheka ezingcono kakhulu zama-pancake ukupheka Ama- pancake angama-post emanzini: zokupheka ezinhle kakhulu zokulungiselela ama-pancake ngobisi omuncu: zokupheka zokuqala zokupheka nezokuqala Ukupheka ikhekhe le-pancake: izindlela zokupheka ezingcono kakhulu I-toppings engcono kakhulu yama-pancake: izithelo, inyama nama-cottage shizi
Ama-pancake adicikile futhi anisela umlomo nge-cottage shizi: zokupheka okupheka kakhulu
Umbono wokubhaka ukukhishwa ekhaya - ama-pancake aluhlaza, izindlela zokupheka nezithombe
I-toppings engcono kakhulu yama-pancake: izithelo, inyama nama-cottage shizi
Pancakes nge-cottage shizi, cherry, sitrobheli ne-vanilla
Iphari elimnandi elinomuthi namabele noma ilayisi: zokupheka esitofu noma kuhhavini
Umthandi ufuna ukukwenza
Kissel kusuka ku-viburnum
Amaqebelengwane amakhekhe anamafutha
Ubuso obuhle bomzimba wesifazane wesimanje
Ukunakekela isikhumba senkinga ekhaya
Isobho laseTurkey nebhontshisi
Ukuya esikhathini esibuhlungu, yini okufanele uyenze?
Indlela yokulungisa ingane esikoleni imizuzu engu-20 ngosuku